Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo Kudagaalamay Degmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho | Allbalcad Online
Home WARARKA Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo Kudagaalamay Degmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyay Ciidamo Kudagaalamay Degmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho
Iskahorimaad hubeysan oo u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda oo hab beeleed u abaabulan ayaa joogsaday kadib markii uu ku baxay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Filish iyo saraakiil milatari ah.
Dhinacyada ku dagaalamay degmada Kaaraan iyo degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho ayaa la kala dhex dhigey ciidamo milatari iyo kuwo nabadsugid ah.
Illaa 10 ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaa ka badana waa ay ku dhaawacmeen,iyadoo dagaalkana uu salka ku hayay muran dhuleed u dhaxeeyay saraakiil ciidan, dhulka la isku hayay oo ku yaalla agagaarka Mirinaayada iyo Kawaan Bari.
Dagaalkan oo saacado badan qaatay ayaa muujinaya sida dowladdu aanay awood ugu laheyn xakameynta qabaa’illada hubeysan ee Muqdisho, iyadoo waliba lagu jiro xaalad kala guur ah oo jahawareer siyaasadeed uu dalku ka jiro.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo ka qeyb galay aaska Saraakiishii ku dhintey Qaraxii Gaalkacyo
Next articleGuddiga doorashada heer Federaal ee lagu Muransan yahay oo laga raray Hotel Decale